INDLU EYAKHIWE NGAMAPULANGWE engu-T2 enendawo yokubhukuda e-Pyrenees - I-Airbnb
INDLU EYAKHIWE NGAMAPULANGWE engu-T2 enendawo yokubhukuda e-Pyrenees
Luz-Saint-Sauveur, Occitanie, i-France
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Romain
U-Romain Ungumbungazi ovelele
Ifulethi eline :
- Ikamelo elilodwa elinombhede olala abantu ababili owodwa (160 x 200);
- Indlu eyakhiwe ngamapulangwe eyi-1 enemibhede emincane engu-2;
- Igumbi lokuphumula elingu-1, elinosofa osekhoneni (lilala abantu abangu-2);
- Ikhishi elilodwa elinetafula lokugoqa (6 pers.), i-TV, uhhavini, isiqandisi, umshini wokuwasha izitsha,...;
- 1 igumbi lokugezela;
- 1 indlu yangasese;
- uvulandi onetafula, ibhentshi nezihlalo (ukubuka izintaba);
- Ibhokisi le-inthanethi (i-WiFi yamahhala);
- Indawo yokupaka;
- Igumbi le-Ski/lamabhayisekili elivamile esakhiweni;
- Indawo yokubhukuda ehlanganyelwayo (yamahhala) ingasetshenziswa ngo-July/August (ukubukwa kwezintaba).
- Ngincamela ukuqasha kwamaviki onke ngo-February/July/August (kusuka ngoMgqibelo kuya kuMgqibelo uma kungenzeka). Ngicela ungitshele uma udinga noma yini.
- isaphulelo esingu-10% enanini lazo zonke izindawo zokuqasha kusuka ebusukwini obungu-7.
- Idiphozithi yama-Euro angu-300 icelwa njengengxenye yokuqasha.
- Amalineni awahlinzekwanga, kuzodingeka ukuletha amashidi, izembozo, amacala, amathawula, amathawula etiye, njll. Nokho, izingubo zokulala/ama-duvets azohlinzekwa kanye nemikhiqizo yezidingo zokuqala (ama-condiments, imikhiqizo yokuhlanza, isikhwama sikadoti, njll.).
- Ukuhlanza akufakiwe enanini lokuqasha. Ngakho-ke kuzodingeka kwenziwe yizivakashi ekupheleni kokuhlala kwazo.
I-Luz ikubeka enkabeni yezindawo zemvelo ezihlaba umxhwele. Ilungele imisebenzi yasezintabeni, ungakwazi ukushushuluza eqhweni ebusika ezindaweni eziseduze zokushushuluza eqhweni ezifana ne-Luz-Ardiden, i-Barrége/La Mongie, i-Gavarnie, i-Cauteret (ukuhamba mahhala ukuya kuma-resort athile).
Kuningi ongakuthola kunokushushuluza eqhweni. Njengomndeni, njengabantu abashadile noma njengomhloli, kukhona okuthile kuwe. Thola imisebenzi elandelayo unyaka wonke: ukuhamba ngebhayisikili/ukuhamba ngebhayisikili entabeni, ukutshuza eqhweni, ukuhamba ngezinyawo (i-Pic duylvania, i-Cirque de Gavarnie, i-Pont d 'Espagne, i-Lac de Gaube, i-Col du Tourmalet, i-Lourdes, njll.), ukuhamba ngezinyawo, ukucaca, i-canyoning, i-bungee jumping, i-paragliding, amachibi asezintabeni eziphakeme, ukuvakasha kwamasiko, ukuzijabulisa, njll.
I-Luz nayo inendawo eyinkimbinkimbi evulekile ehlobo nasebusika. Ngakho wonke umuntu angajabulela izinzuzo zamanzi ashisayo kodwa futhi nezinsizakalo eziningi zomuntu ezinikezelwe enhlalakahleni yakho. Uzothola e-LUZEA, indawo ye-spa lapho abantu abasebasha nabadala bezozijabulisa khona.
Ukuze uthole olunye ulwazi, ungaxhumana nami nge-imeyili noma ngocingo
URomain Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Luz-Saint-Sauveur namaphethelo